U-ALEXIS FLOYD: YINTONI IMEKO YAKHE YOBUDLELWANE KUNYE NEMBALI YOKUTHANDANA? - UMNTU ODUMILEYO
Apha uyazi yonke into malunga nomlingisi waseMelika u-Alexis Floyd, Sithini Isimo Sakhe soBudlelwane? Ngubani owakhe wathandana nomdlali kwixa elidlulileyo?
Ngokuyila u-Anna umboniso wokuqala kwiNetflix NgoFebruwari 11, 2022 , ababukeli bavuyiswa kukubona ibali lentatheli egxotha umkhohlisi owaziwayo ogama lingu-Anna Delvey owaqhatha waza waphanga iibhanki, abahlobo abazizityebi, njl., ukuba enze imali kwaye aphile ubomi obugcwele ubutyebi.
I-star trek 4 ibhengeziwe
U-Alexis Floyd, owayekade edlala indima kaTia kwi-'The Bold Type,' ngoku uya kubuya adlale umlingiswa weNeff kuchungechunge oluzayo lweNetflix Ukuqamba u-Anna. Ngolu chungechunge olutsha luzayo, abantu baqala ukuzibuza ngobomi bakhe, njengokuba ngubani owayekhe wathandana nomdlali kwixesha elidlulileyo? Kwaye sithini isimo sakhe sobudlelwane ngoku?
U-Alexis umtsha ngokufanelekileyo kwishishini lokuzonwabisa, kodwa akakabi nalo udumo nodumo okwangoku. I-akhawunti ye-Instagram ka-Alexis ayibonakalisi kakhulu malunga naye ngaphandle komsebenzi wakhe kunye nexesha lakhe kunye nabahlobo bakhe.
Ngaphandle kolwazi malunga nobomi bakhe obudlulileyo bokuthandana ngaphandle kwi-intanethi okanye naluphi na olunye uhlobo losasazo lweendaba zentlalo, kunzima ukufumanisa kunye nokugqiba ukuba u-Alexis Floyd wakhe wanxulumana okanye hayi okanye ukuba kuye kwakho iimpikiswano malunga naye.
Imo yangoku yoBudlelwane
Njengoko kungekho lwazi malunga nobomi bakhe bokuthandana, sinokucinga ngokukhuselekileyo ukuba u-Alexis akaboni mntu ngoku, kwaye sinokuthi ngokwenene akatshatanga. Ekuphela kwexesha abonise ngalo naluphi na uphawu lothando ngexesha leefilimu zakhe ezimfutshane ezifana 'Yenza Kulula,' nto leyo yayijoliswe ukuba ithathwe ngokusemthethweni kwaye akukho nto.
Ngokukhululwa kwe-Inventing Anna, mhlawumbi wayexakeke kwaye egxile ngakumbi emsebenzini wakhe kwaye uya kuphonononga ukhetho lwakhe emva kwexesha elithile, kodwa okwangoku, sinokugqiba ukuba u-Alexis akatshatanga kwaye akatshatanga.
UAlexis Floyd ngumntu wase-Afrika-waseMelika owazalwa nge-22 kaDisemba, 1993, eCleveland, eOhio. Ungumdlali weqonga, umvelisi kunye nomzekelo onesidanga sikaCarnegie Mellon kwithiyetha yomculo kwaye uye wadlala indima kwiifilimu ezimfutshane ezifana nePoison yoBomi, iFashoni iintshaba kunye neentombi zikaSolanas.
I-5' 7' ft ibhinqa elihle liyakuthanda ukucula, ukuhamba kunye nokudanisa kwaye konke oku kunokubonwa kwi-akhawunti yakhe ye-Instagram, enabalandeli abangaphezu kwe-2.6k kunye nezithuba ze-88. Uthando kunye nokuzinikela kwakhe kumsebenzi awenzayo kunokubonwa nakwiposi yakhe ye-Instagram ebonisa ukusebenza nzima kunye nokuzinikela akubeka kubo.
Ubomi emva kokwenza uAnna
Emva kokukhulula itreyila ye-Inventing Anna, abantu ngokuqinisekileyo bafuna ukwazi ngakumbi ngeli rhwaphilizi kunye nendlela elaye layiqhatha ngayo indlela yalo yokuba imali eninzi. Ngolu chungechunge luza kuphuma nge-11 kaFebruwari, 2022, abantu balungele ukufumanisa ukuba kwenzeke njani. Ngo-Alexis edlala uNeff, indima yakhe engaziwa, ukuthandwa kwakhe kunye nodumo luya kwanda ngokuqinisekileyo.
Inani labalandeli bakhe nalo lilindeleke ukuba liphakame emva koFebruwari 11. Emva kokumbona kwi-Inventing Anna, ndiqinisekile ukuba uya kuthathwa kwiindima kwiichungechunge ezininzi kwaye mhlawumbi abe yinxalenye yeefilimu kwixesha elizayo elizayo.
I-hocus pocus 2 bhanyabhanya
Umhla woku-2 wokukhutshwa
uza kuphuma nini ixesha le-5 elimnyama
ukutshona kwelanga ezinzulwini zobusuku imovie 2021 umhla wokukhutshwa kwenetflix
kami no tou ixesha lesibini
Iifilimu zeentsomi zamaGrike kwi-Netflix 2020